Jowhar.com : Somali Leader News - News: Dhul beereed lagu beeray maandooriyaha Xashiiska oo lagu gubay duleedka Jowhar (Sawirro)
April 24 2014 20:53:29
Dhul beereed lagu beeray maandooriyaha Xashiiska oo lagu gubay duleedka Jowhar (Sawirro)
Maamulka Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa shalay ku gubay duleedka magaalada Jowhar dhul beereed ballaaran oo lagu abuuray maandooriyaha loo yaqaano Xashiishka, iyadoo howl galkan uu ahaa kii ugu ballaarnaa uu sameeyay Maamulka.
Howl galkan oo uu hogaaminayay Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe Cabdi Jiinow Calasow ayaa ka dhacay dhanka barri magaalada Jowhar ayaa lagu gubay todobo beerood oo lagu beeray Xashiishka.
Gudoomiye Cabdi Jiinow oo wareysi siiyay Idaacada VOA ayaa sheegay in beerahan lagu abuuray xashiishka ay maal gelintooda wadeen Ganacsato isugu jira Soomaali iyo Ajnabi, isagoo cadeeyay in Maamulkiisa aanu ogolaan doonin waxyaabaha maandooriyaha.
"Beerahan lagu beeray maandooriyaha waxay ku yaaleen deegaanada Maandheere iyo Deyma-same oo ku yaala bariga magaalada Jowhar, waxay aheyd arrin aad fajaciso nagu noqotay markii aan halkaas tagnay oo aan aragnay dhulka baaxada leh ee lagu beeray maandooriyaha"ayuu yiri Cabdi Jiinow.
Cabdi Jiinow ayaa sheegay inay u qab qabteen beerista maandooriyahan dad kala duwan, isagoo xusay in qaabka loo beeray ay u ekaayeen sidii Sisinta oo kale, balse markii dambe ay ogaadeen inuu yahay xashiish la abuuray.
Gudoomiyaha Maxkamada Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in howl galkan ay qaadeen uu ka dambeeyay markii lagu soo wargeliyay in maandooriyaha xashiishka uu ku beeran yahay tuulooyin ku dhow dhow Jowhar, isla markaana loo abuuro sida dalag beereedyada oo kale
Waa markii u horeysay oo uu Maamulka Gobolka Shabeelaha Dhexe qaado howl galo looga hortagayo maandooriyaha, iyadoo deegaanada ku dhow dhow Jowhar la sheego in lagu beero xashiishka, waxaana horay digniin uga soo saaray Culumaa'udiin.
0 Comments · 6779 Reads
Jowhar.com750,537 unique visits